सन् २०२२ कतारमा हुने विश्वकपको सुरक्षा नेपालीले गर्ने ! - Jerung Films
सन् २०२२ कतारमा हुने विश्वकपको सुरक्षा नेपालीले गर्ने !
wwwjerungfilmswwwjerungfilms 17 Jul 2018
जेरुङ फिल्मस संवादाता, कतारले सन् २०२२ मा आफ्नो देशमा हुन गैरहेको विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको सुरक्षार्थ ठूलो संख्यामा नेपालीहरुलाई लैजाने प्रस्ताव गरेको छ । मंगलबार नेपालका लागि कतारका राजदूत युसुफ बिन मोहम्मदले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँगको शिष्टाचार भेटवार्ताका क्रममा सो प्रस्ताव राखेका हुन् । त्यसका लागि छुट्टै सम्झौता गर्न समेत कतार तयार रहेको राजदूत मोहम्मदले गृहमन्त्री थापालाई अवगत गराएका थिए ।